YEYINTNGE(CANADA): Tuesday, January 08
Wednesday, 09 January 2013 06:37
၁၃၇၄ ခုနှစ်၊ နတ်တော်လပြည့်ကျော် ၁၁ ရက်(၂ဝ၁၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက်)
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အရေးယူဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်းပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့သစ် တာဝန်ယူပြီးနောက် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများ အတွင်း အဂတိတရားများ ကင်းရှင်းရေးနှင့် လာဘ်ပေး လာဘ်ယူမှုများ ပပျောက်စေရေးတို့အတွက် ''လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု အရေးယူ ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီ'' ကို အောက်ပါအတိုင်း ဖွဲ့စည်းလိုက်ပါသည်-
Mg New--- ဒီသတင်းကို ကြိုဆိုပါတယ် .. ဒါပေမယ့် ထပ်ပြောပါရစေ .. အောက်ခြေ၀န်ထမ်းတွေကို ထိုက်သင့်တဲံ့ လစာ လေး ချီးမြင့်ပေးပါ ... ၀န်ထမ်း အများစုက မှန်မှန်ကန်ကန် လုပ်ချင်ပေမယ့် လုံလောက်တဲ့ လခ မရပါဘူး ... အဲဒိတော့ သူတို့အတွက်လည်း ပြန်စဉ်းစားပြိး ထိုသင့်သလိုလေး အရင် လုပ်ပေးစေချင်ပါတယ် ... ဆိုက်ကားဆရာ တစ်ရက်ကို ၃ ထောင် ၄ ထောင် ရပေမယ့် စာရေးတစ်ယောက် တစ်ရက်ကို တစ်ထောင် တောင် အနိုင်နိုင်ပါ ..... အဲဒီတော့ သူတို့ကို အရင် စီစဉ်ပေးပြိးမှ လုပ်စေချင်ပါတယ် ... ဟိုး၎ လလောက်က သူငယ်ချင်း အရာရှိကို ပြောဖူးပါတယ် ..ရပ်ကြဖို့ ... သူက ပြန်ပြောပါတယ် ..ငါတို့က အလယ်လူ .. အထက်က ရပ်ရင် ရပ်မယ် .. အောက်က ရပ်ရင် ရပ်မယ် တဲ့ .... အဲဒီတော့ လာဘ်ဖမ်းတာကို အောက်က မစပဲ အထက်က ကျေးဇူးပြုပြိး စပေးပါ ခင်ဗျာ ...
Pyi Sone--- ကော်မတီတွေ ဖွဲ့စည်းခြင်း သတင်းထုတ်ပြန်မှုတွေမှာ အဲဒီ့ ကော်မတီကို သာမန်ပြည်သူတွေ တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်နိုင်မယ့် အချက်အလက်ကို ထည့်ပေးသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်။ committee public office ဖွင့်ပေးတာမျိုးပေါ့။ ပိုထင်သာမြင်သာရှိတာပေါ့။ အခုဟာ ကော်မတီတွေ ဖွဲ့သာဖွဲ့ကြောင်း သတင်းတွေထုတ်ပြီး ပြည်သူတွေနဲ့ ကင်းကွာနေသလို မြင်မိတယ်။ တချို့ ကော်မတီတွေကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့အမေးတွေ ကျနော်တို့ ခဏခဏ ကြုံရတယ်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/08/20132အကြံပြုခြင်း
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/08/20130အကြံပြုခြင်း
ကချင်=ဗမာ သမိုင်း ။ အပိုင်း(၁) နှင့် အပိုင်း (၂)
by ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ on Friday, January 4, 2013 at 7:40pm ·
ဤဆောင်းပါး မဖတ်ခင် မေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ ရှေးယခင်ကတည်းက ချစ်ကြည်ရေး ရေခံမြေခံ ကောင်းခဲ့ပြီး ရှိထားခဲ့သော အနေအထားများကို ပြန်လည် သတိမူမိစေရန် နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများ ပြေငြိမ်းလျက် ပြန်လည်သင့်မြတ်ရန် ချစ်ကြည်ရေး ကို ရှေးရှုရေးသားနေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့အတွက်ကြောင့် စာရှုသူအနေဖြင့် အပျက်သဘောဆောင် ၍ လူမျိုးရေး၊ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးများ ထိခိုက်ပုတ်ခတ်သော (မှတ်ချက်များပေးခြင်း) ရေးသားခြင်း မပြုလုပ်ရန် ပြောကြားလိုပါသည်။
မည်သို့ အဖြေရှာ၍ မည်သို့ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်မလဲ အပြုသဘော ဆောင်သော မှတ်ချက်များကို မျှော်လင့်ပါသည်။ သူ့ကြောင့်၊ ငါ့ကြောင့်နှင့် ဇာတ်မျောကြီးအတိုင်း ဆက်သွားနေရမည့် အချိန် မဟုတ်တော့ပါ။ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တိုင်းရင်းသားများ အပြန်အလှန် အကျိုးမဲ့ထိပါးလျက် သေဆုံးနေမှုများနှင့်အတူ စစ်ခင်းရာ ဒေသတွင် နေထိုင်ရာမှ ပြေးလွားနေရသော မြေဇာပင်တိုင်းရင်းသားတို့၏ကျီးလန့်စာစားဘဝများကိုစာနာအလေးထားပြီးလက်တွဲဖြေရှင်း ရပါမည်။
ထို့ကြောင့် ပြီးခဲ့တာတွေထက် ယခု အခါသမယတွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် အားလုံးသော ပြည်သူတို့မှ ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓါတ် ဖြင့် ဝိုင်းဝန်းပေးကြပါ ဟု အထူးမေတ္တာရပ်ခံ အပ်ပါသည်။
by Yeyint Kyaw on Saturday, December 17, 2011
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း တက်ရောက်သည့် ဖဆပလညီလာခံ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အကြောင်း မတင်ပြခင်၊ တောင်တန်း ဒေသ တိုင်းရင်းသား တို့နှင့် သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် သမိုင်းဝင် (ပင်လုံ) စာချုပ် ပါ အချက်များကို ဖော်ပြလိုသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ(၁၂)ရက်၊ ၁၉၄၇ ခု။
တက်ရောက်လာသူများမှ ကြားဖြတ်ဗမာ အစိုးရနှင့် ချက်ခြင်းပူးပေါင်းခြင်းအားဖြင့် ရှမ်း၊ကချင်၊ချင်း တို့သည် လွတ်လပ်ရေး ကို ပိုမိုလျှင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟူသောအားဖြင့် သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကန့်ကွက်မည်သူ မရှိပဲ အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူခဲ့ကြသည်။
၁။ တောင်တန်းသားများ စည်းလုံးညီညွတ်ရေးအဖွဲ့ (တစညဖ) ကြိုးကိုင်အဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ ထောက်ခံချက်အရ တောင်တန်းသားများ၏ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးကိုဘုရင်ခံကရွေးချယ်၍ နယ်စပ်ဒေသများကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက် ရန် အတွက် ဘုရင်ခံ၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ခန့်ထားရမည်။
၂။ ဤအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် ကောင်စီဝင်တစ်ဦးအဖြစ်ခန့်ထား၍ ကာကွယ်ရေးနှင့် ပြည်သူကိစ္စရပ်များတွင် ထုံးနည်းဥပဒေအရ အမှုဆောင်ကောင်စီ၏ အာဏာလက်အောက်သို့ ရောက်ရှိစေရမည်။ ဤနည်း လမ်းများ အတိုင်း နယ်စပ်ဒေသဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား အုပ်ချုပ်ခွင့် အာဏာ ကို ပေးအပ်ရမည်။
၃။ အဆိုပါ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ကို ၎င်းနှင့်လူမျိုးခြင်းမတူသော ဒုတိယ အတိုင်ပင်ခံနှစ်ဦးက ကူညီပေးရမည်။ ရှေးဦးစွာ ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးတို့သည် ၎င်းတို့အသီးသီးနှင့် သက်ဆိုင်သည့်နယ်များ၏ ကိစ္စရပ်များ ကို ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် ထုံးနည်းဥပဒေအရတွဲဖက်တာဝန်ယူရသည့် မူအတိုင်း ဆောင်ရွက် စေရမည်။
၄။ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်သည် အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် အဖွဲ့ဝင်လူကြီးအနေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသများ၏တစ်ဦးတည်း သော ကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ပါဝင်စေရမည် ဖြစ်သော်လည်း ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်များသည် နယ်စပ်ဒေသများနှင့် သက်ဆိုင် သော ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွးကြသည့်အခါ အမှုဆောင်ကောင်စီတွင် တက်ရောက်ခွင့် ရှိစေရန် ရမည်။
၅။ အထက်တွင် သဘောတူညီသည့်အတိုင်း ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီကို တိုးချဲ့မည် ဖြစ်သော်လည်း နယ်စပ် ဒေသများ၏ နယ်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ယခုခံစားနေရသော ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကို မည်သည့် နည်းနှင့်မဆို တစုံတရာ လက်လွတ်စေရန် အဆိုပါကောင်စီက ပြုလုပ်ခြင်းမရှိစေရ။ နယ်စပ်ဒေသများအတွက် နယ်တွင်း အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ရာနုန်းပြည့်ရှိစေရမည်ဟူသော မူကို သဘောတူညီကြသည်။
၆။ ပူးပေါင်းထားပြီးသည့် ပြည်ထောင်စု ဤမြန်မာနိုင်ငံအတွင်း သီးသန့် ကချင်ပြည်နယ်တစ်ခု နယ်နမိတ် သတ်မှတ်၍ တည်ထောင်ရန် ကိစ္စမှာ တိုင်းပြုပြည်ပြုလွတ်တော်တွင် ဆုံးဖြတ်ရန် ဖြစ်သော်လည်း ဤကဲ့သို့ သီးခြား ပြည်နယ်တစ်ခု ထားရှိသင့်ကြောင်းကို သဘောတူညီကြသည်။ ဤရည်ရွယ်ချက် အထမြောက်ရန် အလို့ငှာ ပထမခြေလှမ်း အနေဖြင့် ၁၉၃၅ ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရအက်ဥပဒေအရ နောက်ဆက်တွဲပါ စာရင်းပါ အပိုင်း(၂)ဒေသများကဲ့သို့ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် နယ်စပ်ဒေသအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိူလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်အား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရမည်။
၇။ နယ်စပ်ဒေသများ၏ နယ်သူနယ်သားတို့သည် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများတွင် အခြေခံ အသိအမှတ်ပြုထားသော အခွင့်အရေးများကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိစေရမည်။
၈။ ဤစာချုပ်တွင် သဘောတူကြသည့်အစီအစဉ်မှာ ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်နယ်စုတွင် ယခုအပ်နှင်းထားပြီးသော ဘဏ္ဍာရေး နှင့် ပတ်သက်သည့်ကိုယ်ပိုငအုပ်ချုပ်ရေးကို ထိခိုက်စေခြင်းမရှိရန်။
၉။ ဤစာချုပ်တွင်သဘောတူညီကြသည့် အစီအစဉ်မှာ မြန်မာပြည်အခွန်တော်ငွေများမှ ကချင်တောင်တန်း နယ်များ နှင့်ချင်းတောင်တန်းနယ်များက ရသင့်ရထိုက်သော ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီကို ထိခိုက်စေခြင်း မရှိစေရ၊ မြန်မာပြည်နှင့် ပဒေသရာဇ်ရှမ်းပြည်စု၏ဘဏ္ဍာရေးအစီအစဉ်များကဲ့သို့ ကချင်တောင်တန်းနှင့်ချင်းတောင်တန်း များအတွက် အလားတူ အစီအစဉ်များ ထားရှိကျင့်သုံးရန်ဖြစ်နိုင်မည်၊ မဖြစ်နိုင်မည်ကို ဘုရင်ခံ၏ အမှုဆောင်ကောင်စီက နယ်စပ်ဒေသများ အတိုင် ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့် ဒုတိယအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့နှင့် အတူ စစ်ဆေးကြည့်ရှု ရမည်။
ထိုသမိုင်းဝင် ပင်လုံစာချုပ်၌ အစည်းအဝေး တက်ရောက်သော အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ကြ ပါသည်။ ဗမာ ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လက်မှတ်ရေးထိုး၍ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း ကိုယ်စားလှယ် များ အသီးသီးက လက်မှတ်ရေးထိုးကြပါသည်။
(ပုံ) ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်(မြစ်ကြီးနား) ။
(ပုံ) ဒူဝါဇော်ရစ် (မြစ်ကြီးနား) ။
(ပုံ) ဒူဝါ ဒိန်ရတန် (မြစ်ကြီးနား) ။
(ပုံ) ဒူဝါဇော်လ (ဗန်းမော်) ။
(ပုံ) ဒူဝါဇော်လောန် (ဗန်းမော်) ။
(ပုံ) ဦးလဘန်ဂရောင်း (ဗန်းမော်)
(ပုံ) ပိုးလွှာမှုန်း (အေတီအမ်၊အိုင်တီအိုင်(စ်)အမ်းဖလမ်း) ။
(ပုံ) ပိုးသောင်စာခပ် (အေတီအမ်၊တီးတိန်) ။
(ပုံ) ပိုးကွယ်မန်း (အေတီအမ်၊ ဟားခါး )
(ပုံ) ခွန်ပန်းစိန် (တောင်ပိုင်စဝ်ဖလုံး) ။
(ပုံ) စပ်ရွေသိုက် (ညောင်ရွှေစဝ်ဖလုံး) ။
(ပုံ) စပ်ဟုန်ဖ (မြောက်ပိုင်းသိန္နီစဝ်ဖလုံ) ။
(ပုံ) စပ်နွံ (လေးချား စဝ်ဖလုံ) ။
(ပုံ) စပ်စံထွန်း (မိုင်းပွန် စဝ်ဖလုံ) ။
(ပုံ) စပ်ထမ်းအေး (တာမိုင်းခမ်းစဝ်ဖလုံ) ။
(ပုံ) ဦးဖြူ (သထုံ စဝ်ဖလုံ၏ကိုယ်စားလှယ်) ။
(ပုံ) ခွန်ဖုံ (မြောက်ပိုင်း သိန္နီ ) ။
(ပုံ) ဦးတင်အေး ။
(ပုံ) ဦးထွန်းမြင့် ။
(ပုံ) ဦးကြာပု ။
(ပုံ) ဦးခွန်စော ။
(ပုံ) စဝ်ရဖ ။
(ပုံ) ဦးခွန်ထီး ။ တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ပင်လုံညီလာခံကျင်းပပြီးနောက် မိမိတို့ ဒေသ အသီးသီးတွင် လူထုအစည်းအဝေးပွဲများ ကျင်းပလျက် ညီလာခံနှင့် စပ်လျဉ်း ၍ သဘောတုညီချက်များကို ဒေသပြည်သူများအား ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့အတူ တိုင်းပြု ပြည်ပြု လွတ်တော် ကျင်းပမည် ဖြစ်သဖြင့် တက်ရောက်ရန် ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြသည်။
ရှေ့ အပိုင်း(၁) တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း ဖဆပလ ခေါင်းဆောင်များနှင့် ပြေလည်မှုမရ၍ ပြန်တော့မည် ဒူဝါကြီးများမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ မေတ္တာရပ်ခံချက်နှင့်အတူ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအပေါ် ကြည်ညိုလေးစား ယုံကြည်မှုများကြောင့် နောက်တစ်ရက်တွင် ညီလာခံ ပြန်လည်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ညီလာခံတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းမှ ကချင်ခေါင်းဆောင်များ တောင်းဆိုသည့် အတိုင်း ကချင်ပြည်နယ် သတ်မှတ်ရေးကို ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
အခြေခံ ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁/၆တွင် “ မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်းမော်ခရိုင်များဟူ၍ ယခင် က ခေါ်တွင်ခဲ့သော နယ်မြေများကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းတွင် ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် နယ်မြေတစ်ခု အဖြစ် သီးသန့် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ထို ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် နယ်မြေကို ဤမှနောင်အခါတွင် ( ကချင်ပြည်နယ်)ဟူ ခေါ်ဆိုရမည် ဖြစ်သည်။ ” ဟု ရေးဖွဲ့ထားသည့် အတိုင်း မြစ်ကြီးနား အပိုင်း(၁)၊(၂) နှင့် ဗန်းမော်အပိုင်း (၁)၊(၂)တို့အား ပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပေါင်းစည်း၍ ကချင်ပြည်နယ် ဟု သတ်မှတ် ခဲ့ကြသည်။ ကချင် ပြည်နယ်၏ နယ်မြေ အကျယ်အဝန်းသည် အရှေ့လောင်ဂျိ တွဒ် ၉၆ံနှင့် ၉၈ံ၄၈ ကြား ၊ မြောက် လတီ တွဒ် ၂၃ံ၂ရ နှင့် ၂၈ံ၅၅ ကြား ရှိပြီး ဧရိယာစတုရန်းမိုင်ပေါင်း(၃၄၃၇၉)ခန့် ရှိသည်။ ကချင်ပြည်နယ်သည်ပြည်နယ်များတွင် ဒုတိယအကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ နယ်စပ်မျဉ်းအဖြစ်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ တိဘက်ပြည်၊ တရုတ်ပြည် တို့မှ နယ်မြေသတ်မှတ်ယူ၍ ကချင်ပြည်နယ် အဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့သည်။
အပိုင်း(၃) လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက်ပိုင်းအခြေအနေများ နှင့် ကချင်ပြည်နေ့ ဟုခေါ်တွင်သော(နေ့) စတင် ကျင်းပခဲ့ခြင်း တို့ကို ဆက်လက် ဖော်ပြပေးပါမည်။
လေးစားချစ်ကြည်စွာ နေထိုင်နိုင်ရေး မျှော်လင့်လျက်-
ဒေါက်တာ ဦးမနာမ်တူးဂျာ ၏ ကချင်တိုင်းရင်းသားများ၏ နိုင်ငံရေးနောက်ခံသမိုင်း ဖြစ်ရပ်မှန်အကျဉ်း ။
ကချင်=ဗမာ သမိုင်း (အပိုင်း-၃) နှင့် (အပိုင်း-၄)
by ကိုဝိုင် ဝိုင်ကေ on Friday, January 4, 2013 at 8:00pm ·
နိုင်ငံရေး အကင်းပါးသော ဦးနုက ကချင်များကို ပြည်နယ် သတ်မှတ်ပေးသည့်အတွက် ကချင်ခေါင်းဆောင်များ ထံမှ ဂတိ တစ်ခု တောင်းပါသည်။ ထိုဂတိမှာ “ကချင်တိုင်းရင်းသားများသည် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ဘယ်တော့ အခါမှ ပြည်ထောင်စုမှ မခွဲထွက်ရန်” ဟူသော ဂတိစကားဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ၁၉၄၇-ခုနှစ်၊ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံတွင် ကချင်ပြည်နယ် ကို ပြည်ထောင်စုမှ ခွဲထွက်ပိုင်ခွင့်ကို ထည့်သွင်းမထားခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်သည် ၁၉၄၈-ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၄)ရက်နေ့ နံနက်(၄)နာရီတိတိ တွင် ဗြိတိသျှအစိုးရ အုပ်ချုပ်မှု လက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့ပြီးနောက် (၆)ရက် အကြာတွင် ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့၌ ကချင်ပြည်နယ်ကို တရားဝင် မွေးဖွားခဲ့ပြီး “ ကချင်ပြည်နယ်နေ့” ဟု သမိုင်းဝင် သတ်မှတ် ခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်။
ထိုနေ့တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူ၊ မနောကွင်း၌ ပထမဆုံးအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အထိမ်းအမှတ်မနောပွဲကို စည်ကား သိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပခဲ့ကြသည်။ထို မနောပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော သမ္မတကြီး (ဦး) စဝ်ရွှေသိုက် ကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ခဲ့ပြီး နံနက်(၈)နာရီတွင် မနော မဏ္ဍပ်ကြီးကို ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
( မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့၍ အစိုးရသစ်ပေါ်ထွန်းချိန်တွင် ပထမဆုံးသမ္မတမှာ ရှမ်း တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင် ဖြစ်နေသည်ကို ရှု ကြည့်လျှင် ရှေးအခါက ချစ်ကြည်ရေးကို တွက်ဆနိုင်ပါသည်။)
( ယခုလာမည့် ၂၀၁၃ ခု၊ ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့သည် (၆၅)နှစ်မြောက် “ ကချင်ပြည်နယ်” နေ့ ဖြစ်သည့် အတွက် ဤဆောင်းပါးရေးချိန်နှင့် တိုက်ဆိုင်နေ၍ ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့အား ပြောလိုပါသည်။ မိမိတို့အား စစ်ဘေးသင့် ပြည်သူများသို့ စာနာကူညီနိုင်ရန် လက်တွဲဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကချင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်း အားလုံး ကို လည်း အမှတ်တရ ရှိနေပါမည်။…စကားချပ်…။)
တဆက်တည်းမှာပဲ သမ္မတကြီးသည် ပထမဆုံးသော ကချင်ပြည်နယ်ကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းပေးပြီး ကချင်ခေါင်းဆောင် ဆမား ဒူဝါ ဆင်ဝါးနောင် အား ပြည်နယ်၏ ပထမဆုံးကောင်စီဥက္ကဌ အဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြောက်လျက် ကျမ်းသစ္စာ ကျိန်ဆို စေခဲ့ပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် နိုင်ငံတော် သမ္မတသည် ပြည်ထောင်စု မြန်မာ နိုင်ငံတော်၏ ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံ ဥပဒေစာအုပ်ကို ကောင်စီဥက္ကဌသစ် လက်သို့ပေးအပ်ခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရသစ်ကိုလည်း တစ်ပြိုင် တည်း ဖွဲ့စည်းလျက် ဇန္နဝါရီလ(၁၀)ရက်နေ့ကို “ကချင်ပြည်နယ်နေ့” ဟူ၍ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင်ပြည်နယ်တစ်ရပ်အဖြစ် လူသိရှင်ကြား အခိုင်အမာ အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုနေ့မှစ၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ပြီး မနောပွဲတော်ဟု လူသိများလျက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ ကို ကျင်းပနေသည်မှာ ယနေ့တိုင်ထိအောင် ဖြစ်ပါသည်။
ဖဆပလ ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရခေတ် တွင် ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီ(၃)ခုပါသည်။
(၁) ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင် ဦးဆောင်သော ကုန်ဖန် (Kung Hpan) ပါတီ ၊
(၂) ဒူဝါဇော်လောန် ဦးဆောင်သော ကေအဲန်စီ (KNC) ပါတီ ၊
၃။ ဒူဝါဇော်ရစ် ဦးဆောင်သော လူငယ်အဖွဲ့အစည်းပါတီ (Pawng Yawng Ram Rawt Hpung ) ပါတီ တို့ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့သည် ကချင်တိုင်းရင်းသားများကိုသာမက ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများနှင့် ဗမာလူမျိုးများကိုပါ စည်းရုံးပြီး ပါတီစုံစနစ်ကို ပီပြင်စွာ ကျင့်သုံးခဲ့သည်ကို တွေ့ရပေမည်။
အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲပြီးတိုင်း ပြည်နယ်အစိုးရသစ် ဖွဲ့သည့်အခါ ကချင် မဟုတ်သော အခြားလူမျိုးများထဲက အမတ်များကို အနည်းဆုံးဝန်ကြီးဌာန(၄) နေရာ၌ ခန့်အပ်ခဲ့သည်မှာ ချစ်ကြည်ရေး ခိုင်မာစွာ လက်တွဲခဲ့မှုကို ထင်ရှားစေခဲ့သည်။
၁၉၄၈-ခုမှ ၁၉၆၂-ခု နှစ် ကာလအတွင်းကချင်ပြည်နယ် ကောင်စီ ဥက္ကဌ အသီးသီးမှာ
(၃) ဒူဝါ ဇော်လောန်
(၄) ဒူဝါ ဆန်ထဆင် တို့ ဖြစ်ကြသည်။
နောက်ဆုံး အာဏာမသိမ်းခင်ထိ ဥက္ကဌမှာ ဒူဝါဇော်ရစ် ဖြစ်ပြီး ခြောက်လခန့်သာ တာဝန်ယူခဲ့ရသော်လည်း တိုတောင်း လှသည့် အုပ်ချုပ်မှုကာလတွင် ကချင်ပြည်နယ်ကို ရှိရင်းစွဲထက် များစွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သူဟု ကျော်ကြားသည်။
ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်သည် နိုင်ငံတော်သမ္မတရာထူးကိစ္စနှင့် ရန်ကုန်မြို့သို့အသွား လမ်းခုလပ်မှာရောက်ဆဲ (၂-၃-၁၉၆၂) ရက်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ဦးဆောင်သော စစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းလိုက်သည်။ ရန်ကုန်ရောက်သော် သမ္မတရာထူးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းထောက်များက “ စစ်တပ် အာဏာသိမ်းသည့် အပေါ် ဒူဝါကြီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ” ဝိုင်းမေးကြရာတွင် ဆမားဒူဝါဆင်ဝါးနောင်က “ ငါ့လိမ္မော်ခြံလောက်တောင်မှ စိတ်မဝင်စားဘူး” ဟု ပြန်ဖြေသည်။ မြစ်ကြီးနား ပြန်ရောက် တော့လည်း ဆွေမျိုးများက စိတ်မကောင်းစွာ ကြိုဆိုကြသည်ကိုတွေ့တော့ ၎င်းက ဘာမှခံစားမှု မပြပဲ “ အခုတော့ ငါလည်း မင်းတို့နှင့်ဘာမှ မခြားတော့ဘူး၊ မင်းတို့နှင့် အတူတူ တောင်ယာခုတ်စားမှာပေါ့” ဟုဆိုလေ၏ ။
ကချင်လူမျိုးများထဲတွင် ပထမဆုံး တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ ရရှိသူမှာ ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်ခွန်နောင် ( Lahpai Hkun Nawng ) ဖြစ်သည်။
ကချင်ပြည်နယ်၏ ပထမဆုံး အရေးပိုင် (D.C) သည် ဒူဝါ လဖိုင်ဇော်ဂျွန်း (Du Wa Lahpai Zau Jun ) ဖြစ်သည်။
ကချင်တိုင်းရင်းသားတို့သည် မိမိနိုင်ငံတော်ကိုအထူးချစ်မြတ်နိုးပြီးတန်ဖိူးထားတတ်သောလူမျိုးများဖြစ်ကြသည့် အားလျော် စွာ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သော အင်္ဂလိပ်၊ ဂျပန် တို့အား အသက်ပေါင်းများစွာ စွန့်လွတ်ခံ၍ ကာကွယ်တိုက်ခိုက်ပေးခဲ့သော လူမျိုးများဖြစ်ပါသည်။
လွတ်လပ်ရေးရပြီးခါစ ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတော်အား ကာကွယ်ရာတွင်လည်း ကချင်တိုင်းရင်းသား တို့သည် ထိပ်ဆုံးမှပါဝင်ခဲ့သည်ကို သမိုင်းတွင်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုအချိန်က ရောင်စုံသူပုန်များ ပေါ်ပေါက်စဉ်ကာလဖြစ်ပြီး ကချင် တပ်ရင်းများ၊ ကချင်တိုင်းရင်းသားများ မှ ပြည်ထောင်စုအတွက် ရွပ်ရွပ်ချွံချွံ တိုက်ခိုက်၍ ကာကွယ်ခဲ့ကြသည်။ (အင်းစိန်တိုက်ပွဲသည် အထင်ရှားဆုံး ဖြစ်သည်။)
နိုင်ငံရေးပြဿနာ ဆိုရာတွင် လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်းတွင် သမ္မတကြီးကိုယ်တိုင် ကချင်ပြည်နယ် ဟူသော သီးခြားရပ်တည်ခွင့်-ပြုခဲ့ကြောင်း ရှေ့စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ သို့သော် ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အတွင်း အပြောင်းအလဲများ၊ အခြား တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များ နှင့် ပြည်တွင်း မငြိမ်သက်မှုများ ဖြစ်ပေါ် လာပြီးနောက်ပိုင်းမှ စ၍ တိုင်းရင်းသားတို့နှင့် ပြည်ထောင်စု အစိုးရလက်ထက်၊ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီခေတ် လက်ထက် စသည်နှင့် ထိုစဉ် မှ ယနေ့တိုင် နိုင်ငံရေးပြဿနာများ မဖြေရှင်းနိုင်သည့်အပြင် အပြိုင် အဆိုင် အောင်နိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကြောင့် စစ်ဖြစ်ပွားရာဒေသများတွင် ဗမာဟုကြားလျှင် စစ်သားဟု တထစ်ချ မှတ်ယူသည် အစွဲများ ဖြစ်ပေါ်လျှက် ပြည်တွင်းက ဗမာတွေ သည်ပင်လျှင် ထိုသို့ဟူ၍ ထင်မှတ် ခံခဲ့ရသည် အထိ လူမျိုးရေးသံသယများ ယှက်နွယ်လာခဲ့သည်။
ထိုသို့ထင်မှတ်မှု မှာ မမှန်ကြောင်း တက္ကသိုလ် တက်ရောက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည် ကချင် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား အများအပြားသည် သိမြင်ခဲ့၍ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်ထက်တွင် (၎င်းတို့မှပြည်မဟုခေါ်သော ကျောင်းသား များနှင့် )လက်တွဲ၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ထိုကြောင့် မြန်မာပြည်တွင် ပထမဆုံး သေဒါဏ်ချမှတ်ခံရသော ကျောင်းသား ဖြစ်သည့် ချင်းတိုင်းရင်းသား ဆလိုင်း တင်မောင်ဦး အပါအဝင် အခြား တိုင်းရင်းသား ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်၊ ခေါင်းဆောင်လောင်းများကို ပြင်းပြင်း ထန်ထန် နှိပ်ကွက်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံရေးပြဿနာ နှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းပြရလျှင် ပြည်ထောင်စုအစိုးရက ကချင်ပြည်နယ်အပေါ် နိုင်ငံရေး အရ ဖိနှိပ်ခြင်း၊ စီးပွားရေး အရ လက်ဝါးကြီးအုပ်ခြင်း၊ လူမှုရေးအရ ဥပက္ခောပြုခြင်း၊ တိုင်းရင်းသားများကို ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး မပေးခြင်း နှင့် တိုင်းရင်းသားတို့၏ စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများကို လွတ်လွတ် လပ်လပ် ထိန်းသိမ်း မြှင့်တင်ခွင့် မရရှိခြင်း စသည်တို့သည် ကချင်အမျိုးသားတော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်လာအောင် အဓိက မီးမွှေးပေးလိုက်သော အကြောင်းအရာများ ဖြစ်သည်။
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/08/2013 1 အကြံပြုခြင်း
အမေစုက ကချင်ပြည်နယ်အရေး ဒီလိုဖြေထားတယ်
■ခင်မောင်စိုး။----။ ဟုတ်ကဲ့ ကချင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေက ဒီရက်ပိုင်း ပိုဆိုးနေပါတယ် အစ်မ၊ ဘယ်လိုများ သုံးသပ်လို့ရမလဲခင်ဗျ။
■ဥက္ကဋ္ဌ။----။ အဲဒီဟာကတော့ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးတဲ့ နေရာမှာ တစ်ခုခုလိုနေပြီလို့ ဒီလိုပဲ သုံးသပ်ရမှာပါပဲ။ အစ်မတို့ကလည်း ကိုယ်တိုင်ပါဝင်တာ မဟုတ်ဘူးလေ။ ကိုယ်တိုင် မပါဝင်တဲ့ လူတွေဆိုတော့ ဘယ်လို အပေးအယူ လုပ်နေလဲ၊ ဘယ်လိုဆွေးနွေးနေလဲဆိုတာ အသေးစိပ်မသိဘူး။ အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် အစ်မကနေပြီးတော့ ဘေးကနေ လေ့လာပြီးတော့ ဝေဖန်ရတာက လွယ်တယ်။ တကယ်ကိုယ်က အသေးစိပ် မသိဘဲနဲ့ ဘယ်လိုပိုပြီးတော့ ကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ လိုမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
■ခင်မောင်စိုး။----။ အစ်မသော်လည်ကောင်း၊ တခြားလွှတ်တော် အမတ်တွေသော်လည်းကောင်း ဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာ ၀င်ရောက်ပါဝင် ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေမျိုး မရှိဘူးလားခင်ဗျ။
■ဥက္ကဋ္ဌ။-------။ အဲဒါကတော့ အစိုးရဘက်က လုံးဝဖိတ်ခေါ်ခြင်း မရှိပါဘူး။ အစ်မ ကိုယ်တိုင်ကတော့ ကြာလှပါပြီလေ။ ဒီကိစ္စမှာ ပါဝင်ပြီးတော့ အကူအညီပေးချင်တယ်ဆိုရင် လုပ်ဖို့အဆင့်သင့်ပါပဲလို့ ပြောထားတာ တစ်နှစ်တောင်မကတော့ပါဘူး။ လွှတ်တော်အနေနဲ့လည်း ဒီလိုဝင်ပြီးတော့ ကူညီချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေ ရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အစိုးရဘက်ကတော့ ဒါကို ဖိတ်ခေါ်တာ၊ ကမ်းလှမ်းတာမျိုး မရှိပါဘူး။
Source: 3.1.13, RFA, အမေစုနှင့် ဦးခင်မောင်စိုး အမေးအဖြေ
(ဒီလှိုင်းစာစောင်၊ အတွဲ-၂။ အမှတ်-၁။)
ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးသစ် ဖြစ်လာပြီးနောက် မစ္စတာကာရိုအာဆိုသည် ပြည်တွင်းအရေးကြီးကိစ္စများကို ဘေးချ၍ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ခရီးထွက်ကာ အထူးစီးပွားရေးဇုန်တည်ဆောက်မည့် ဒေသတစ်ခုအား လည်ပတ်ရင်း မြန်မာနိုင်ငံအတွက် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီများ ထပ်မံပေးအပ်ရန် အတည်ပြုပြောကြားသည်။
ယင်းမှာ ဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဒုတိယ၀န်ကြီးချုပ်လည်းဖြစ်သူ မစ္စတာတာရိုအာဆို၏ ပထမဦးဆုံး နိုင်ငံခြားခရီးစဉ်လည်း ဖြစ်သည်။ မြန်မာနိုင်ငံသို့ သုံးရက်ကြာ အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်း အသက် ၇၂ အရွယ် မစ္စတာတာရိုအာဆိုသည် သမ္မတဦးသိန်းစိန်အပါအ၀င် အစိုးရအဖွဲ့တွင် အရေးပါသော ၀န်ကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဂျပန်နိုင်ငံက ကြွေးမြီယန်းငွေ ၅၀၀ ဘီလီယံ(ကန်ဒေါ်လာ ၆ ဘီလီယံ) လျှော့ပေါ့ပေးမည်ဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်ကြွေးမြီသစ် ယန်းငွေ ၅၀ ဘီလီယံ ပေးအပ်မည်ဟုလည်း သမ္မတဦးသိန်းစိန်အား အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းမှာ ယခင်ဂျပန်အစိုးရ၏ ကတိက၀တ်အပေါ် ထပ်မံအတည်ပြုခြင်း ဖြစ်သည်။
“ပြည်ပကြွေးမြီပြဿနာ ဖြေရှင်းရာမှာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အခန်းကဏ္ဍအတွက် မြန်မာနိုင်ငံက အရမ်းကို ကျေးဇူးတင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်ကျေနပ်ပါတယ်” ဟု မစ္စတာတာရိုအာဆိုက သတင်းထောက်များအား ပြောကြားသည်။
“မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကြီးမားတဲ့ အလားအလာရှိတယ်လို့ ကျွန်တော်ခံစားရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က ပုဂ္ဂလိကနဲ့ အစိုးရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းသို့ လည်ပတ်စဉ် ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတာရိုအာဆိုက ပြောကြားသည်။ ကန်ဒေါ်လာ ၁၂ ဒသမ ၆ ဘီလီယံ အကုန်အကျခံ တည်ဆောက်မည့် ၂၄၀၀ ဟက်တာ (ဧက ၅၉၀၀ ကျော်) ကျယ်ဝန်းသော အထူးစီးပွားရေးဇုန်မှာ ဂျပန်-မြန်မာ ဆက်ဆံရေး၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေအား ယမန်နှစ်အတွင်း ပြဋ္ဌာန်းပြီးနောက် အထူးစီးပွားရေးဇုန်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဥပဒေများကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေဆဲဖြစ်သည်။ သီလ၀ါဆိပ်ကမ်းကြောင့် အလုပ်အကိုင်ရှားပါေးသာ နိုင်ငံတွင် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အရေးများ ရရှိလာမည်ဟု မြန်မာနိုင်ငံမှအရာရှိများက မျှော်လင့်ထားသည်။
ဂျပန်-မြန်မာ အစည်းအရုံး၏ စီနီယာအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးလည်းဖြစ်သူ မစ္စတာတာရိုအာဆိုက နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းနှင့်အတူ ခရီးသွားနေသော သတင်းထောက်များအား “ငါတို့ ကားနဲ့လျှောက်မောင်းနေတာ ကောင်းကင်မှာ မဟာဓာတ်အားလိုင်းတွေ မင်းတို့တွေ့မိလား။ ငါတော့ မတွေ့မိဘူး။ ဒီနိုင်ငံမှာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လုံလုံလောက်လောက်မရှိဘူး။ တည်ငြိမ်တဲ့ ဓာတ်အားပေးပို့မှုဆိုတာ ဘယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်မဆို အရေးကြီးတယ်”ဟု ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ကောင်းကွက်လေးများလည်း ၎င်းကရှာတွေ့ခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မှာ ညအခါမှာပင် ဘေးကင်းလုံခြုံသည်။ ဂျပန်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင် ဖြစ်သည်။ အရာရှိများက အစည်းအဝေးများအတွက် အချိန်ကိုက်ရောက်ရှိကြသည်။ ဂျပန်လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် အရေးကြီးသော နောက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။
-Reuters / WSJ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က..ကာချုပ် ကိုအပစ်ရပ်ဖို့"အမိန့်"မပေးခဲ့ပါ
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က "တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်" ဒုဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် ကို "အမိန့်" ပေးတာ မဟုတ်ဘဲ၊
"သမတရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် မင်းဇော်" က "ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)" ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်း ကို "အကြောင်းကြား" ခြင်းသာဖြစ်သတည်း။
ကျမတို့ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့ ကစည်ပင်ဝန်ထမ်းတွေတာဝန်ကျေကြပုံ......
ကျမတို့မြိုကအိမ်တွေမှာ မြေပိုလေးတွေရှိကြရာမှာ လူတွေက ငွေလေး၁သောင်း လောက်ပိုလာရင်ကိုအဖီလေးထိုးလိုက်ထမင်းချက်ချောင်လေးအပြင်ထုတ်လိုက်လုပ်ကြပါတယ်
အခုတော့ရှင် အဒါမျိုးလေးတွေမှန်သမျှ ၁၂ရပ်ကွက်လုံးကအ ဆောက်အဦးပေါက်စကွေးသေးသေးလေးမှန်သမျှကို အခွန်၁၄၀၀ကျပ်ကစပြီးလိုက်လံကောက်ခံနေပါတယ်
ယောက်ကျားနာမည်နဲ့အိမ်ခွန်ဆောင်ထားရင် မိန်းမနာမည်နဲ့ကောက် ၂ယောက်လုံးနာမည်နဲ့ရှိပြီးသားဆိုလျှင်သားသမီးနာမည်နဲ့ကောက် နဲ့ ကောက်ခံနေတာပါ
ရုံးကိုသွားတော့ ဒုဦးစီး မမကပြန်လည်စိစစ်ပေးပါမယ်တဲ့ သူပဲလိုက်ကြည့်ပြီးလုပ်ခိုင်းထားတာပါ မသိတဲ့သူတွေက တော့ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့
ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းမှာပြည်သူတွေ တာဝန်သိသိနဲ့ အခွန်ထမ်းဆောင်ရမယ်ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ မတရားသဖြင့်ကောက်ခံလာရင်လည်း ပြောဆိုတင်ပြရမှာပါ။
မှတ်ချက်-သူငယ်ချင်း၁ ယောက်ကကိုယ်တွေ့ကို ပြောပြလို့မခံချင်လို့တင်ပြတာပါ ဓာတ်ပုံကရှိတဲ့ ပုံတင်ပေးလိုက်ရပါတယ် တိုက်ဆိုင်သွားရင်ခွင့်လွှတ်ပါရှင်
KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့ ၁ဝ မိုင်အကွာ ဖွန်းပျဉ်ဘွမ်တောင်ကုန်းကို အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်
လွတ်လပ်တဲ့အာရှအသံ RFA ရုပ်မြင်သံကြား အစီအစဉ် (ဇန်နဝါရီလ ၈ ရက် ၂ဝ၁၃)
- KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့ ၁ဝ မိုင်အကွာ ဖွန်းပျဉ်ဘွမ်တောင်ကုန်းကို အစိုးရတပ်က ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်၊
- အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး မာတီ နာတာလီဂါဝါ ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကို လေ့လာ၊
- ဘီလျံနာသူဌေးကြီး George Soros နဲ့ ဦးဝင်းတင်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ တွေ့ဆုံ၊
- လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း လုံးဝ ဖျက်သိမ်းတဲ့အထိ ဆက်လက် တောင်းဆိုသွားမည်၊
- ကြည့်မြင်တိုင် ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြန်ရုပ်သိမ်းဖို့ လက်မှတ်ထိုး တောင်းဆိုမည်၊
- နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူ အယူသည်းမှုပပျောက်ရေး ဟောပြော၊
- မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က လူကုန်ကူးမှု တိုက်ဖျက်ရေး အသိပညာပေးမှု သတင်းစာရှင်းလင်း၊
- "လူ့အခွင့်အရေး လူ့ဂုဏ်သိက္ခာ" နိုင်ငံတကာ ရုပ်ရှင်ပွဲတော် မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပမည်၊
- မသန်စွမ်းကလေးငယ် ဘဝကံဖြစ်စဉ် အကြံပြုဆွေးနွေးပွဲ စာနယ်ဇင်းရှင်းလင်း၊
- အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ဟောင်ကောင် AHRC အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အတွေ့အကြုံ ရှင်းလင်း၊
- KNU ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်ခရီးစဉ်၊
- ကချင်ပြည်နယ်စစ်ပွဲ ရပ်ဆိုင်းရေး သြစတြေလျက ဆန္ဒပြပွဲ၊
- (KKE) ၂ဝ၁၁ အကယ်ဒမီဆု (ဒါရိုက်တာဝိုင်းနဲ့ RFA တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်)
- ကရင်နီ တိုင်းရင်းသားဘာသာ အစီအစဉ် (ဖရူဆိုမြို့နယ်မှာ အမှတ် (၁၄) စစ်တပ်လေ့ကျင့်ရေးကျောင်း ပြန်လည်ရုတ်သိမ်းပေးဖို့ ဒေသခံတွေက တောင်းဆိုနေတဲ့အကြောင်း- မြန်မာဘာသာစာတန်းထိုး)
... စတဲ့အစီအစဉ်တွေကို ဒီနေ့ရှုစားရမှာပါ။
ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး... ဂေါက်မရိုက်.... ကေတီဗီမဆိုပါနော်....
မနက်စောစော Face Book ဖွင့်လိုက်တော့ မိသားစုပုံအောက်မှာ ဒီလိုလေး မှတ်ချက်ချထားတာတွေ့ရပါတယ်။
(နေပြည်တော်မြို့မဈေး၊ ညဈေးတန်းက မိသားစုညစာ)
Myo Thant =>>ဟိုတယ်မှာစားတဲ့ညစာစားတဲ့အချိန်မျိုး၊ဂေါက်ကွင်းမှာအပန်းဖြေတဲ့အချိန်မျိုးလေးတွေလဲတင်ပေးပါဦး မမြင်ဘူးမသွားနိုင်တဲ့ပြည်သူတွေ မြင်ဖူးအောင် ပါဗျာ....
ကို မျိုးသန့်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော် ဂေါက်လုံးဝမရိုက်ပါဘူး။ ဟိုတယ်မှာလည်း တရားဝင်ညစာစားပွဲအခမ်းအနားမျိုးဖိတ်လို့ သွားစားတာကလွဲရင် မစားနိုင်ပါဘူး။ ကေတီဗီက အိမ်မှာလည်းမဆိုပါ။ ဘယ်မှာမှ လည်းမဆိုပါဘူး။ ကြိုက်သလို စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။
လက်နက်သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်သေတ္တာစစ်ဆေးသူ သတိပေးပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်
သီလဝါဆိပ်ကမ်းမှ လက်နက်သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်သေတ္တာစစ်ဆေးသူ အကောက်ခွန်ဝန်ထမ်း(၂)ဦးအား ညွှန်/ချုပ် အဆင့် မှ သတိပေးပြစ်ဒါဏ်ချမှတ်
Nay Paing's photo.
တမလွန်ဆိုတာ မိုးရွာလေ့ရှိသလား မောင်။
အချိန်တိုတိုလေးမှာပဲ မောင့်ရဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်ကလေးလည်း တိုသွားတယ်။
ဘယ်လိုဘုရားသခင်မျိုးရဲ့ လက်နဲ့မှ စစ်ပွဲတွေကို သတ်လို့ရမလဲ။
မောင် မမြင်ဖူးတဲ့ သားလေးက မောင့်ကိုလည်း မြင်ဖူးမှာမဟုတ်ဘူး။
ကလေးပြန်ပြောမယ့်စကားတွေက ကျွန်မအတွက် အလျော်အစားလည်း ကြီးနိုင်တယ် မောင်။
ရန်ကုန်မှာ မိုးရွာတဲ့နေ့က မောင်ကျွန်မဆီပြန်လာတယ်။
ဒါပေမဲ့ မောင်ကျွန်မဆီပြန်လာခဲ့တယ် မောင်။
ကျွန်မ စစ်ပွဲတွေကို မုန်းပြီး စစ်သားတွေကို ချစ်တယ်မောင်။
စစ်ပွဲတွေက စစ်သားတွေကို သတ်တယ်။
မမျှော်လင့်တဲ့ကံကြမ္မာက ကျွန်မမျှော်လင့်ချက်ကလေးကို ဝင်တိုက်သွားတယ်။
မောင်ပြန်လာခဲ့သလိုပဲ ကျွန်မဆီ မောင် ပြန်လာတယ်။
(အပတ်စဉ် ၅၂ မှ ဗိုလ်မျိုးမင်းသန့် နှင့် မကြာသေးမီက ကျဆုံးသွားကြသော တပ်မတော်သား ၄၈ ယောက် ကောင်းရာသုဂတိ လားပါစေ)
စစ်ခရိုနီဦးပိုင်ကုမ္ပဏီကလက်ပန် တောင်းဒေသကိုအာဏာသိမ်းထား ဆဲ
KO Han Win Aung's Photo&Video
စစ်ခရိုနီတွေမြေသိမ်းတောင်ဖြို လုပ်နေတာတွေကိုလက်ပန်တောင်း ပြည်သူတွေကိုယ့်ဒူးကိုယ်ချွန်ကာ ကွယ်
KNU အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့် မေးမြန်းချက်
KNU ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့်
ကရင်သတင်းဌာန (ကေအိုင်စီ) တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
KIC - ၁၅ကြိမ်မြောက် ကွန်ကရက်အပြီးနောက်ပိုင်း ကေအဲန်ယူရဲ့ ရပ်တည်ချက်နဲ့ ရှေ့ဆက် ဦးတည်ဆောင်ရွက်မဲ့ လုပ်ငန်းစဉ် တွေကို ပြောပြပေးပါလား။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - စည်းလုံးညီညွတ်မှုဟာ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအနေနဲ့လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးတွေကိုလည်း လုပ်မယ်။ ဒါတွေဟာ မရှိမဖြစ် ရှိသင့်တဲ့အရာဖြစ်တယ်။ ဒါတွေအားလုံးဟာ ပြည်သူလူထုအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှု ရှိရမယ်လို့ ကျနော်တို့ ယုံကြည်ထားတယ်။ ရှေ့ဆက် အမျိုးသမီးပါဝင်မှုမှာလည်း ဦးဆောင်မှုကော၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပါ ကျနော်တို့ မြှင့်တင်ပေးဖို့ လိုတယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ကျနော်တို့ဟာ ကိုယ့်ပြည်သူလူထု အခွင့်အရေးအတွက် ဦးဆောင်သွားမယ့် အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ရှေ့ဆက်သွားမယ့် လုပ်ငန်းစဉ်မှာဆိုရင် အခက်အခဲများစွာ ရင်ဆိုင်နေကြရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ကရင်လူမျိုးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲ အခြားတိုင်းရင်းသားတွေ၊ ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လည်း ရှေ့ဆက် လက်တွဲပြီး အတူ လုပ်ဆောင်သွားကြရမှာ ဖြစ်တယ်။ နောက်တခုကတော့ နိုင်ငံရေးပြဿနာကို နိုင်ငံရေးနည်းနဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ပြုလုပ်ရ မှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာများကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့မရသရွေ့ ကျနော်တို့ လက်နက်တွေကတော့ ကျနော်တို့လက်ထဲမှာ ပဲ ထားရှိရဦးမှာ ပါ။ နောက်တခုက လာမဲ့ ဗဟိုကော်မတီအစည်းအဝေးမှာ ကျနော်တို့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင် ဖွဲ့သွားဖို့ရှိ တယ်။ ဒါက ပြည်သူလူထု အခွင့်အရေးတွေကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ပါပဲ။ ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ ပြည်သူလူထု အခွင့်အရေးတွေ ကို ထိခိုက်အောင်လုပ်တာ အစိုးရတစ်စုထဲ မဟုတ်ပါဘူး။ တခါတလေ ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းတွေမှာလည်း လုပ်တာ ရှိတယ်။ ဒီအ ခြေအနေတွေဟာ ကျနော်တို့ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်ကနေတဆင့် ကော်မရှင်ကို တင်ပြလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
KIC - ရှေ့ဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြန်တက်လာတဲ့ ကေအဲန်ယူခေါင်းဆောင်သစ်တွေ ဦးဆုံး အစီအစဉ် ဘယ်လိုရှိထားပါသလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - အခုလက်ရှိမှာက ငြိမ်းချမ်းရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ သေသေချာချာ ဆွေးနွေးတာ ဘာမှမရှိသေးပါဘူး။ ဒီအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးတခုပဲ ရှိသေးတာ။ အဲဒါတောင် ထိထိရောက်ရောက် မဟုတ်သေးဘူး။ လိုက်နာရ မယ့် စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေပဲ အစိုးရက သဘောတူထားသေးတာ။ ဒါကို အခြေခံပြီး စစ်မှန်တဲ့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးကို အသေအချာ တည်တံ့ခိုင်မြဲသွားအောင် လုပ်ဆောင်သွားရမှာပါ။ ကျနော်တို့သဘောထားက စစ်မှန်တဲ့အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ခိုင်မြဲ အောင်လုပ်ပြီး ဆက်ပြီး နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးကို လုပ်သွားမယ်။ နိုင်ငံရေး အရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာကို ကျနော်တို့ ကရင် လူမျိုးပဲ မဟုတ်ဘူး၊ အခြားသောတိုင်းရင်းသားတွေလည်း ပါဝင် သွားရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါ အစကနဦးကနေ သဘောထား ခံယူချက် ထားရှိထားတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ရှေ့ဆက်သွား မှာဖြစ်တယ်။ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Road Map အဆင့် ၄ဆင့်က တော့ အခြေခံဖြစ်တာမို့ ချထားတဲ့လမ်းစဉ်အဆင့်အတိုင်း သွားရမှာပဲ ၁။ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ၂။ခိုင်ခိုင်မာမာဖြစ်လာရေး ၃။နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဒီအဆင့်တွေအားလုံး အဆင်ပြေ ချောမွေ့သွားပြီးမှ နောက်ထပ် နိုင် ငံပြန်လည်ထူ ထောင်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ကျနော်ယုံကြည်တယ်။
KIC - ဒုက္ခသည်တွေ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကေအဲန်ယူ ရဲ့ သဘောထားနဲ့ အစီအစဉ်တွေ ဘယ်လိုရှိထားပါ သလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒါကတော့ နိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိမှ၊ စစ်မီးငြိမ်းမှသာ ဒါဟာ အဆင်ပြေမှာ။ ယခုလက်ရှိအရ ပြန်ကြည့်ရင် ကျနော်တို့ အပစ်ခတ် ရပ်စဲရေး က အသေအချာ မရှိသေးဘူး၊ ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေး တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု မရှိသရွေ့ကတော့ တိုက် ပွဲတွေ ပြန်ဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့တွေကို ပြန်လည်နေရာ ချထားဖို့ကတော့ နိုင်ငံတကာ စံချိန်စံညွန်း ရှိထားတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့လုပ်ရမယ်။ ပြန်မယ့်လူကလည်း သူတို့ဆန္ဒ အရ ဖြစ်ရမယ်။ ပြည်တွင်း လုံခြုံစိတ်ချရမှု မရှိသရွေ့ကတော့ ပြန်ပို့ဖို့ အစီ အစဉ်မရှိသေးဘူး။ ကျနော်တို့လည်း လက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး။ ဒါက တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှုရှိမှ၊ ဒုက္ခသည်တွေလည်း ဆန္ဒရှိမှ၊ နိုင်ငံ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရမှ သူတို့တွေကို ပြန်ပို့ရမှာဖြစ်တယ်။
KIC - ပြည်တွင်းပြည်ပမှာ ရောက်ရှိနေကြတဲ့ ကရင်အားလုံး စည်းစည်းလုံးလုံးပြန်နေနိုင်အောင် ဘယ်လိုလုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါသလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒီမေးခွန်းက ကျနော်တို့အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ ယခုဆို အခြေအနေ အကြောင်း ကြောင်းကြောင့် ကျနော်တို့လူမျိုးတွေဟာ နေရာတော်တော်များများ ရောက်ရှိနေထိုင်နေရတယ်။ သူတို့ ပတ်ဝန်းကျင် မတူကြ ဘူး။ အတွေးအမြင်လည်း ကွဲပြားကြတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဘယ်မှာပဲနေနေ ကျနော်ယုံကြည်တာကတော့ သူတို့မှာ ကရင်လူမျိုး ဆိုတဲ့စိတ် ရှိကြတာပဲ။ သူတို့ကို စည်းလုံးနိုင်ရေးအတွက် ငြိမ်းချမ်းမှုရမှ လုပ်လို့ရတာဖြစ်တယ်။ နောက် ကျနော်တို့ အားလုံး ကရင်လူမျိုးဆိုတဲ့အောက်မှာ ရည်မှန်းချက်ကို တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့် သွားရဦးမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒါတွေလည်း ပြည်တွင်းပြည်ပ မှာ ရောက်ရှိနေ ထိုင်ကြတဲ့ ကရင်လူမျိုးအားလုံးလည်း အတူတကွ ပါဝင်လုပ်ဆောင် ရမှာ ဖြစ်တယ်။ ငြိမ်းချမ်းဖို့အတွက် စည်းလုံး ခြင်းဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ။
KIC - ကရင်ဒေသတွေမှာ စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လာပြီးချဉ်းကပ်ထားတာတွေ ရှိတော့ အနာဂတ်မှာ လုပ်ဆောင်သွား ဖို့ ကေအဲန်ယူ ကွန်ဂရက်မှာ ဘယ်လိုပေါ်လစီမျိုး ချမှတ်ထားရှိပါသလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ကျနော်တို့ လူနေမှုဘဝ အဆင့်မြင့်ဖို့ ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး မျှော်လင့်ချက်ရှိကြတယ်။ နိုင်ငံတကာအ ဆင့်မှီအောင် လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့်လို့ အခုကတော့ အပစ်ခတ်ရပ်စဲရေး ငြိမ်သက်မှုမရှိသေးဘူး။ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ် ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လောက်ထိ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲ ၃။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိခိုက်မှု ရှိသလား။ ပြည်သူတွေအတွက် နေရာဒေသ ထိခိုက်နိုင်သလားဆိုတာ ကျနော်တို့လေ့လာသွားရဦးမယ်။ တစ်ခါထဲ လုပ်မယ်ဆို တာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလေ။ ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ ကော်မတီတရပ် ဖွဲ့စည်းသွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။ ဒီကော်မတီရှိလာမှ စီးပွား ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်၊ အစီအစဉ်တွေ ချပြပြီးတော့ ပြည်သူတွေအတွက် အကျိုးရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေ ကျနော်တို့ ကြိုးစား လုပ်ဆောင်ပေးဖို့ ရှိတယ်။ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုတည်း အတွက် မဟုတ်ဘူး။ အနာဂတ်မှာလည်း ပြည် သူတွေအတွက် အကျိုးရှိ အောင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအတွက်လည်း အကျိုးရှိအောင် လုပ်ဆောင်သွားဖို့ ရှိပါတယ်။ စီးပွားရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရွက် ဖို့က တော့ အတွေ့အကြုံရှိတဲ့သူ၊ နားလည်တတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရှင်တွေကို သီးသန့် ရွေးချယ်သွားမှာပါ။
KIC - ဒီအပစ်ခတ်ရပ်စဲရေးနောက်ပိုင်း ဆက်ဆံရေးရုံးတွေ ဖွင့်လှစ်ထားတာရှိတယ်လေ။ ဒီရုံးတွေရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေက ဘာတွေပါလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးကြောင့် ဒီဆက်သွယ်ရေးတွေ ဖွင့်ရတယ်။ ဒီရုံးတွေဟာ ကျနော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ အစိုးရအကြား ဆက်သွယ်မှုလုပ်ဖို့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဒီလို နားလည်ထားသလို အစိုးရဘက်ကလည်း လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်။ အခက်အခဲဖြစ်စေ၊ နားလည်လွဲမှုဖြစ်စေ နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ကြားရှိလာရင် ဆက်သွယ်မှုတွေလုပ်ပြီး အသိပေးရမှာဖြစ်တယ်။ နောက် ပြည်သူလူထုရဲ့ ခံစားချက်တွေကို တင်ပြနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ ပြည်သူတွေရဲ့ ဖိနှိပ်ပြုကျင့်ခံရမှုဖြစ်စေ၊ ကျနော်တို့ အဖွဲ့အစည်းလုပ် ငန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မပြေလည်မှုတွေရှိလာသည်ဖြစ်စေ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဖြစ်စေ၊ စစ်တပ်ဖြစ်စေ ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့အတွက် ဖြစ်တယ်။ ရှေ့ ဆက်ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ပြည်သူလူထုတွေအတွက် ဒီထက်မက လုပ်နိုင်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်လာဖို့ကို ကျနော်တို့ သဘောထားရှိတယ်။
KIC - ကေအဲန်ယူ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ပြန်မပါလာတော့တဲ့အပေါ် ဝေဖန်မှုတွေ ရှိလာတာမို့ အဲဒီအပေါ် မှာ ဘယ်လိုပြောပြချင်ပါသလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာ ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ ဗဟိုကော်မတီမှာ မပါဝင်တာကတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ မဲပေး တဲ့စနစ်က ဆုံးဖြတ်ပေးတာဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ ဘယ်သူ့ကိုရွေးမလဲဆိုတာကို တိုင်ပင်ခွင့်ရှိပေမယ့် မဲပေးတော့ ကိုယ့်စိတ် ကြိုက်ကိုပဲ ပေးကြတာပါ။ တစ်ချို့ကတော့ ဒါဟာ သူ့အဖွဲ့ကိုယ့်အဖွဲ့၊ သူ့ဂိုဏ်းကိုယ့်ဂိုဏ်းတွေ ရှိနေကြတယ်လို့ မြင်နေကြ တယ်။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆို အမြင်တမျိုး တည်းတော့ မရှိပါဘူး။ တချို့ကိစ္စတွေကိုတော့ ကျနော်တို့ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်နဲ့ လုပ် ရတာမို့ ဒါဟာလည်း ဒီမိုကရေစီနည်းကို ကျင့်သုံးတာပါပဲ။ နောက်တချက်ကတော့ ကျနော်တို့ စစ်ဦးစီးချုပ် ကို ရွေးချယ်တဲ့နေရာ မှာ ကျနော်တို့ တစ်ဦးနှစ်ဦးထဲက ရွေးချယ် တင်မြှောက်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တပ်မဟာမှူးတွေ အားလုံးက ၀ိုင်းဝန်းရွေး ချယ်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တချို့ခေါင်းဆောင်တွေဟာ အတွေ့အကြုံ ရှိတဲ့အပြင် လုပ်သက်ရင့်တဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တယ်။ ဒုတိယအချက် အနေနဲ့ သူတို့တွေရဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်နဲ့ အရည်အချင်းပါ။ အဲဒီသုံးချက်အပေါ်မှာ ကျနော်တို့ တပ်မဟာ ၇နဲ့ တပ်မဟာ ၅က ခေါင်းဆောင်တွေကို ရွေးချယ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
KIC - ကေအဲန်ယူမှာ အရင်ရှိခဲ့တဲ့ အရံဗဟိုကော်မတီ ပြုတ်သွားပြီး ဗဟိုအမြဲတမ်း ကော်မတီတခုပဲ ရှိတော့တာနဲ့ Executive Committee-EC အဖွဲ့ဝင်တွေ ဌာနဆိုင်ရာကို မကိုင်တွယ်ဖြစ်တော့တာ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာ နည်းနည်း ရှင်းပြပေးပါလား။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - အရံဗဟိုကော်မတီဆိုတာက ဖွဲ့ စည်းပုံကနေလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါက ဗဟိုကော်မတီအတွက် အရံလူငယ်တွေ ကို မြေတောင်မြှောက် လက်တွဲခေါ်ယူပြီး ဗဟိုကော်မတီအ တွက် ပြင်ဆင် ထားတဲ့အနေနဲ့ အရံဗဟိုကော် မတီ တွေအဖြစ် ၁၉၈၂ခုနှစ်ကတည်းကစပြီး လုပ်လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့လို့ အရံဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့တွေက စနစ်တကျ မရှိခဲ့ ဘူး။ တချို့အရံကော်မတီတွေဟာ ဗဟိုကော်မတီထက် ပိုပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်တာလည်း ရှိတယ်။ ဒါကြောင့် လူငယ်တွေ အနာ ဂတ် အုပ်ချုပ်ရေးမှာ ပါဝင်နိုင်အောင်၊ အလုပ်ပိုလုပ်နိုင်အောင်လို့ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ဗဟိုကော်မတီအဖွဲ့ကို ၄၅ယောက်ထိ တိုးချဲ့လိုက်ပြီး အရံကော်မတီကို မထားတော့တာပါ။ ဒုတိယ တချက် အနေနဲ့က ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီ နဲ့ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံ ရေးကိစ္စတွေနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကိုသာ ကြီးငါးကြီးက အဓိကထား ဦးစီးလုပ်ဆောင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ ကိစ္စရပ်များ အထူးသဖြင့် စီးပွားရေး၊ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေး၊ တရားစီရင်ရေး ကိစ္စတွေကိုတော့ တခြားဗဟိုကော်မတီဝင်တွေ က လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလို တာဝန်ခွဲဝေတော့ လုပ်ငန်းမှာ ထိရောက်မှုပိုရှိမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
KIC - ကချင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်နေတဲ့ တိုက်ပွဲတွေအပေါ် မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ ရှေ့ဆက် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်သွားမလဲ။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့အတူတကွ လက်တွဲ လုပ်ဆောင်သွားရမှာ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့အနေနဲ့ စစ်ရေး တစ်ခုတည်း မဟုတ်ပဲ နိုင်ငံရေးအရကော နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံးပြီးတော့ လုပ်ဆောင်သွား ရမယ်။ အဖွဲ့ အစည်းပေါင်းစုံနဲ့ အတူတ ကွ လက်တွဲ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်မှ ကျနော်တို့ခွန်အားတွေ ရှိလာပြီး ကျနော်တို့ရဲ့ လိုလားချက်၊ တောင်းဆို ချက်တွေကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် နဲ့ တောင်းဆိုနိုင်မယ်။ လိုလားချက်၊ ရည်မှန်းချက်တွေ ရအောင် လုပ်ဆောင် နိုင်မယ်။
KIC - ကေအဲန်ယူဟာ လာမဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာ နိုင်ငံရေးပါတီအနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့ ရည်မှန်းချက်ရှိပါသလား။
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ကျနော်တို့ဟာ တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ဖြစ်တယ်။ ကျနော်တို့ဟာ လက်နက်ကိုင်ဆောင် ထားတဲ့ သူတွေ ဖြစ်တယ်။ အစိုးရက လုပ်မဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်း သူတို့ ၂၀၁၅ အတွက် တစ်တိုင်းပြည်လုံး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မှာပဲ။ အခုပြဌာန်းထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံကို ကျနော်တို့တော့ လက်မခံဘူး။ ဒါက တိုင်းရင်းသားတွေအတွက် ဘဝအာမခံချက်မရှိဘူး။ ကျနော်တို့ အတွက် မျော်လင့်ချက်မရှိဘူး။ ဒီမိုကရေစီ အာမခံချက် အခွင့်အလမ်း မရှိဘူး။ စစ်တပ်က စိုးမိုးနေ ဆဲဖြစ်တဲ့အတွက် ကျနော်တို့ လက်မခံဘူး။ ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို မပြင်နိုင်ရင်တော့ ကျနော်တို့လူမျိုးအတွက် အာမခံချက် မရှိဘဲနဲ့ ပါတီမှတ်ပုံတင် (Register)လုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်ရောက်ဖို့ မဖြစ်နိုင်ဘူး။
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကျွန်းပေါ်မှာကုလားများကို နေရာချထားမည်/ရခိုင်များကို ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းပေးမည်
ကျောက်ဖြူမြို့နယ်ကျွန်းပေါ်မှာ နေရာချထားမည့်ကုလားများကို ကြောက်ပါက ဌာနေရခိုင်များကို ကျောက်ဖြူမြို့ပေါ်သို့ ပြောင်းပေးမည်ဟု ရခိုင်ဝန်ကြီးများကပြော
စစ်တွေ ၊ ၀၉ ဇွန်န၀ါရီ ၂၀၁၃ ၊ Coral Arakan News ၊ [ သတင်း ]
ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစိုင်းကြီးကျွန်နေ ဒေသခံရခိုင်များအား ကိုယ်စားပြုစကားပြောနေသော ဘုန်းတော်ကြီးအား ၄င်းအနေဖြင့် ကုလားများ နှင့် ကျွန်းပေါ်တွင် အတူမနေရဲပါက ကျောက်ဖြူမြို့ သို့ပြောင်းရွှေ့ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မပြောင်းရွှေ့လိုသော ဒေသခံများမှာလည်း “ ပြသနာတခုခုဖြစ်ပေါ်လာပါက မပြောင်းရွှေ့လိုသူတို့၏တာဝန်သာဖြစ်ကြောင်း” သွားရောက်အကြောင်းကြားသော ၀န်ကြီး နှစ်ဦးက ပြောဆိုခဲ့သည့်အတွက် အစိုင်းကြီးကျွန်း ဒေသခံများမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်နေကြသည် ဟု Coral Arakan အား ဒေသခံများက ပြောကြားသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇွန်န၀ါရီလ (၇)ရက်နေ့က ရခိုင်ဝန်ကြီး ဦးသာလူချေ နှင့် ဦးလှဟန်တို့အဖွဲ့ ကျောက်ဖြူမြို့နယ် အစိုင်းကြီးကျွန်းသို့ သွားရောက်ပြီး၊ ဒေသခံရွာသူရွာသားများနှင့် ဘုန်းတော်ကြီးတို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြစဉ် အထက်ပါအတိုင်း ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အစိုင်းကြီးကျွန်းပတ်ဝန်းကျင်တွင် ငသန့်သန်ကျွန်း၊ ဇင်ကျွန်းကျေရွာ၊ သလူမော်ကျေးရွာ၊ ငပသုန်ကျေးရွာ၊ နောင်တော်ကျေးရွာ၊ ကျွန်းပါးစပ်ကျေးရွာ၊ဂုံးတောင်ကျေးရွာ၊ ပြင်ဝန်းကျေးရွာ၊ သဲချောင်းကျေးရွာ တို့တည်ရှိသည်။ ဒေသခံ အများစုသည် ရေလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြသည်။
ထို အစိုင်းကြီးကျွန်းမှ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှသို့ နေ့ချင်းပြန် သွားလာနိုင်သဖြင့် ဘင်္ဂါလီများကို ဤကျွန်းတွင် နေရာချထားပါက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖက်သို့ ဘင်္ဂလာဒေ့ရ်ှမှ ကုလားများကို တင်သွင်းရာတွင် စခန်းထောက် ဖြစ်လာနိုင်သည် ဟု သုံးသပ်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေသည်။
(KSNG ၏ သတင်းကို ကိုးကား၍ Coral Arakan အတွက် သောင်းကြွယ် ရေးသားသည်။)
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ်မှ အပြန်၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလ ၁ ရက်နေ့က စတင်ပြီး ၆ ရက်နေ့အထိ ကချင်ပြည်နယ်ကို ငြိမ်းချမ်းရေးခရီးစဉ် အနေဖြင့် သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးကို ဘားမားဗီဂျေမီဒီယာက ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမြအေးက အဲ့ဒီခရီးစဉ်အတွင်း ကေအိုင်အေမှ ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ် အက်စ်ဂွမ်မော်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ ထိုးစစ်တွေကို အရှိန်အဟုန် လျှော့ချဖို့နဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်မြောက်ဖို့တွေကို ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပြင် ကချင်ဒေသ စစ်ဘေးသင့်ပြည်သူများရဲ့ အခြေအနေတွေကို သွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။
ယနေ့ ညနေ (၃) နာရီ နီးပါးတွင် ဗန်းမော်-လိုင်ဇာ လမ်းကြောင်းရှိ ဖွန်းပျဉ်ဘွမ်မှ KIA အမှတ် (၂၄) တပ် ရင်း၏ ရှေ့ကာ ကင်းစခန်း ပွိုင့်တခု လက်လွှတ် လိုက် ရကြောင်း KIA စစ်ရုံးချုပ် အရာရှိ တဦးက ပြောပါသည်။
“ လေယာဉ်နဲ့ (၁၂) နာရီမှာ တခါ၊ နေ့လည် (၂) နာရီ လောက်မှာ တခါ ဓါတုဗုံးတွေနဲ့ အကြိမ်ကြိမ် ၀ဲပြီးတော့ အပြင်းအထန် ကျဲချတယ်ဗျ။ လေယာဉ်ကလည်း အကြီး စား တိုက်လေယာဉ်တွေဗျ။ အငယ်စားလေးတွေ မ ဟုတ်ဘူးနော်။ ပြီးတော့ ခန်ကိုင်းတောင်ရဲ့၁၂၀ မမနဲ့ ၁၀၅ မမကလည်း တလစပ်ကို မနားတမ်းကို ပစ်ခဲ့ တယ်။ မရေတွက် နိုင်တော့ဘူး။ ရာနဲ့ချီ ပြီးတော့ကို ပစ်တယ်။ မြေပြင် စစ်ကြောင်းကလည်း စစ်မျက်နှာ နှစ်ဖက်နဲ့ ညှပ်ပြီး စစ်ဆင်တယ်၊ အဲဒါကြောင့် နောက် ဆုတ်ပေးလိုက်တာပါ။” ဟု ဆိုပါသည်။
ယခု လက်လွှတ်ရသော စခန်းသည်၊ ပွိုင့် (၇၇၁) ၏ အရှေ့ဖက် KIA တပ်ရင်း (၂၄) ၏ ကင်းထောက် စခန်းဖြစ်သည်။ ဤပွိုင့်သည်၊ တပ်ရင်းရုံး၏ အောက် အဆင့် ပွိုင့်တခုဖြစ်ပါသည်။ အလားတူ လဂျားယန် စခန်းကိုလည်း လက်နက်ကြီးများ နှင့် အတူ လေ ကြောင်းဖြင့်လည်း အပြင်းအထန် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အစိုးရ မြေပြင် တပ်ဖွဲ့များသည် ယနေ့ နံနက် ၈း၁၅ မိနစ်ခန့်တွင် တုန်ဟုန်းရွာ အရောက်၌ ကျောင်း သား တပ်မတော်နှင့် အေအိုင်အေ ပူးပေါင်းတပ်များ၏ ကြားဖြတ်ချေမှုန်း ခြင်းကို ခံရပါသည်။ ဤသို့ကြောင့် လဂျားယန် စခန်းကို လေယာဉ်နှင့် လက်နက်ကြီး များ ဖြင့်သာ တိုက်ခိုက် ခဲ့သည်ဟု ဆိုပါသည်။
အစိုးရ လက်နက်ကြီးများသည် ညနေပိုင်း (၅) နာရီအထိ ပစ်ခတ်ခဲ့သော်လည်း မြေပြင်တပ်များ၏ လှုပ်ရှားမှုသည် မရှိသလောက် ငြိမ်နေပြီးဖြစ်သည်။ လက်နက်ကြီးများ သည် KIA တပ်များ မိမိတပ်နားသို့ ချင်းကပ်ခြင်း မပြုနိုင် ရန် ကာပစ် စနစ်ဖြင့် ပစ်ခတ်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရ တပ်ဖွဲ့များသည် နယ်မြေ အနေအထားနှင့် တိုက် ပွဲပြင်းထန်မှုများကြောင့် လူအင်အား အပါဝင် စစ်ကူနှင့် ပစ်ကူ များ လိုအပ်လျက် နေပါသည်။ စစ်ကူ ရယူရာတွင် လည်း မြေပြင် စစ်ကူထက် လေယာဉ်နှင့် ရဟတ်ယာဉ် စစ်ကူများကိုသာ အားထားတော့မည်ဟု စစ်ရေး အကဲ ဖတ်များက ဆိုပါသည်။ ဤအားသာချက်ကို အစိုးရဖက် က သိရှိသွားပြီးဖြစ် ပါသည်။
ဤသို့ကြောင့် နက်ဖြန်တွင် လေကြောင်း အကူများဖြင့် အင်အားဖြည့်ပြီး KIA နှင့် ကျောင်းသား တပ်မတော်တို့၏ လဂျား စခန်းကို ပြင်းထန်စွာ တိုက်ခိုက် လာဖွယ် ရှိမည် ဟု အကဲခတ်များက ဆိုပါသည်။
ဒုတိယ မောင်တော ဖြစ်တော့မည့် ရန်ကုန် တစ်ဘက်ကမ်း က ဒလမြို့လေး
ကမ္ဘာဂြိုလ်နှင့် အနီးဆုံးဂူဗိမာန်'s photo.
ဒလမြို့နယ်ရှိ ရပ်ကွက်တိုင်းတွင်တစ်ရပ်ကွက်လျှင်ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်း တချို့ရပ်ကွက်
များတွင်တစ်ကျောင်းထက်ပို၍ရှိသော်လည်း ဒလမြို့နယ်အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင်မူ ယခုအချိန်
ထိ ဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းမျှမရှိသေးပါ သို့သော်လည်း မူဆလင်အာရဗီစာသင်ကျောင်းမှာမူ
ထို အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်များစွာထဲက ရှိခဲ့ပါသည်။အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှ
မူစလင်ဘာသာဝင်များသည် သောကြာနေ့ဗလီတက်၍ (ဂျူမာဖတ်)လျှင် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှ
ထို အာရဗီစာသင်ကျောင်းတွင်မဖတ်ပဲ ဗိုလ်ရန်ပြေရပ်ကွက်မှ ဒလမြို့တွင် အကြီးဆုံး၊အခမ်းနားဆုံး
ဗလီတွင်လာရောက်၍ ဗလီတက်(ဂျူမာဖတ်)ကြပါသည်။သူတို့အပြောအရ အာရဗီစာသင်ကျောင်း
အဆင့်သည် သောကြာနေ့ဗလီတက်(ဂျူမာဖတ်)၍ ရလောက်သော အဆင့်မရှိဟု သိရပါသည်။
သို့သော်လည်း ယခုအချိန်တွင် ထိုအောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်မှအာရဗီစာသင်ကျောင်းကို ဗလီအဆင့်
သို့တိုးချဲ့နေခဲ့တာ လအနည်းငယ်ကြာခဲ့ပြီဟု သတင်းရထားပါသည်။ယခင် ဗိုလ်ရန်ပြေဗလီတွင်
လာရောက်(ဂျူမာဖတ်)နေသော အောင်မင်္ဂလာမှမူစလင်များလည်း ယခုအခါ တိုးချဲ့၍ဗလီအဆင့်
ပြောင်းရန်ကြိုးစားနေသော အောင်မင်္ဂလာအာရဗီကျောင်း(ဗလီ)တွင်သာ သောကြာနေ့(ဂျူမာဖတ်)
ကြပါတော့သည်။ဒလမြို့နယ်တွင် နှစ်အနည်းငယ်တွင် မူဆလင်လူဦးရေ သိသိသာသာတိုးတက်
လာသည်မှာ ယခုအချိန်တွင် ဒေသခံမြန်မာတိုင်းရင်းသားများနှင့်လူဦးရေ ညီတူညီမျှနီးပါး ရှိနေပြီ
ဖြစ်ပါသည်။ဒလမြို့နယ်၏ အချမ်းသာဆုံး စာရင်းများတွင်လည်း မူစလင်များကနေရာယူထားပြီဖြစ်
ပါသည်။နောင်နှစ်ပေါင်းဆယ်ဂဏန်းလောက်အတွင်းတွင် ဒလမြို့နယ်သည် ဒုတိယမောင်တောကဲ့
သို့ ဖြစ်လာနိုင်သည့်အခြေအနေများရှိနေပါသည်။ယခုလည်း ဘုန်းကြီးကျောင်းပင်မရှိသေးသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒလမြို့နယ် အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်တွင် အခန့်သားနေရာယူထားသော အာရဗီစာသင်
ကျောင်းအား ဗလီအဆင့်သို့တဖြေးတဖြေးပြောင်းလဲနေပြီဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာများ၊ဒေသခံများ အချိန်
ဖေါ်ပြပါပုံသည် အောင်မင်္ဂလာ ၂ လမ်း အောင်မင်္ဂလာ ရပ်ကွက် ဒလမြို့ ရှိ အာရဗီ စာသင်ကျောင်းမှ တိုးချဲ့ ပလီ ဆောက်လုပ်မည့် ပုံဖြစ်ပါသည် ။ ပထမ ကျောင်းလေးမှာ အရွယ် အစားသေးငယ်ပါသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က..ကာချုပ် ကိုအပစ်ရပ်ဖို့"အမိန့်...
KIO ဌာနချုပ်လိုင်ဇာနဲ့ ၁ဝ မိုင်အကွာ ဖွန်းပျဉ်ဘွမ်ေ...
ပြန်ကြားရေးဒုဝန်ကြီး... ဂေါက်မရိုက်.... ကေတီဗီမဆို...
လက်နက်သယ်ဆောင်လာသည့် ကုန်သေတ္တာစစ်ဆေးသူ သတိပေးပြစ်ဒ...
KNU အတွင်းရေးမှူး ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းနှင့် မေးမြန်း...
ဒုတိယ မောင်တော ဖြစ်တော့မည့် ရန်ကုန် တစ်ဘက်ကမ်း က ဒ...